Mametraka Archives ny router - 192.168.8.1
Ny router dia boaty iray manome PC, finday avo lenta ary maro hafa hanatevin-daharana ilay tamba-jotra mitovy. Ara-dalàna, ny router dia atambatra avy eo mankany amin'ny modem hanome Internet mifandray amin'ny gadget izay mifandray amin'ny router. Ity boky ity dia manandrana manampy anao amin'ny fotoana fanomanana ny TP-Link Router.
Mety hanana zavatra vitsivitsy ao anaty kaontenera ianao:
Famatsiana herinaratra ho an'ny mpamily
Bokikely fananganana fitaovana
Tariby USB (azo atao vitsivitsy)
Diska mpamily (azo atao vitsivitsy)
Tariby tambajotra (ho an'ny vitsy manao)
Fametrahana ny router TP-Link
Raha nividy TP-Link Router farany ianao, dia tena tsotra ny manamboatra ny router & manangana azy. Azonao atao ny manangana tsindry ilay router TP-Link Wi-Fi vaovao ary afaka mampiasa azy io.
Fanamarihana: Raha te-hifandray amin'ny Internet, ny router dia tokony ampifandraisina amin'ny jack data na modem mavitrika.
Hanangana ny TP-Link Router vaovao hanaraka an'ity torolàlana ity
Ampifamadiho ny router ary ampifandraiso amin'ny router ny solosainao amin'ny tariby Ethernet.
Raha vao mifandray, tsidiho ny tranokala ary mankanesa any www.tplinkwifi.net na 192.168.0.1
Apetraho ny tenimiafin'ny fidirana router amin'ny alàlan'ny fanoratana azy indroa. Aleo hitazona azy fotsiny– “admin“.
Kitiho ny andao hanomboka / hiditra.
Avy hatrany, araho ny baiko an-tserasera & ampifanaraho amin'ny Internet sy Wireless Network Network ny safidinao Swift Setup.
Soraty ny anaran'ny (SSID) an'ny Wireless Network any an-tsaha ary koa, mametraha passkey mba hiarovana ireo tambajotra Wi-Fi.
Azonao atao ny mamarana ny fizotrany, raha vao miditra amin'ny Wireless Connection amin'ny SSID miaraka amin'ny tenimiafinao ianao.
Fandaminana mandroso ：
Vonoy ny router, modem ary PC.
Ampifandraiso amin'ny modely WAN an'ny router TP-Link amin'ny alàlan'ny tariby Ethernet ny modem; mampifandray PC amin'ny seranan-tsambo LAN an'ny router TP-Link amin'ny alàlan'ny tariby Ethernet.
Alefaso aloha ny router & PC & modem manaraka.
Midira amin'ny pejin-tranonkala fitantanana miorina amin'ny tranokala an'ny router. azafady mba jereo
Ampifanaraho ny fifandraisana WAN Typeof
Ao amin'ny pejin-tranonkala fitantanana ny router, tsindrio Network > WAN amin'ny pejin-tranonkala ankavia:
Ovao ny karazana fifandraisana WAN amin'ny PPPoE.
Soraty ny solonanarana sy tenimiafina PPPoE izay atolotry ny ISP.
Tsindrio Save raha tehirizina ny fikiranao, avy eo ny router dia hifandray amin'ny Internet aorian'ny fotoana fohy.
Miandrasa segondra vitsy ary hamarino ny seranan-tsambo WAN amin'ny pejin-tranonkala Status, raha manondro adiresy IP sasany izy io, izay manondro ny fifandraisana misy eo amin'ny Router & naorina ny Modem.
Raha tsy misy adiresy WAN IP & tsy misy fomba Internet, dia manaova Power Cycle toy ny etsy ambany:
1. aloha vonoy ny modem DSL & vonoy ny router & PC, ary taomy mandritra ny roa minitra;
2. Ankehitriny avereno ny modem DSL, miandry mandra-pahatongan'ny modem, avy eo alefa ny router & PC-nao indray.
Miaraka amin'ny tariby Ethernet mifandraika amin'ny router key an'ny TP-Link router amin'ny alàlan'ny port LAN. Ny seranana LAN fanampiny rehetra ao amin'ny router TP-Link N dia hanome ny fidirana amin'ny Internet amin'ny fitaovana ankehitriny.
Sokajy Natsangana ny zotra Leave a comment